अनसन तोड्दै डा. केसीले मोदीलाई लेखे यस्तो चिठी – अभियान खबर
सबै खबर – सधै खबर
अनसन तोड्दै डा. केसीले मोदीलाई लेखे यस्तो चिठी
काठमाडौं – वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १७ औं सत्याग्रह तोडेका छन्। मंगलबार नवौं दिनमा केसीले आफ्नो सत्याग्रह तोडेको घोषणा गरेका हुन्
पानीमा नून हालेर नुहाउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस्
आजको राशिफल कस्ताे छ हेेर्नुहाेस् वि.सं. २०७६ कात्तिक २७। बुधबार। इ.स. २०१९ नोभेम्बर १३
२४ घन्टामा देशभर १८० जना संक्रमित
यी चार राशी भएका व्यक्तिसँग हुन्छ तेज दिमाग !
आषाढ महिनाभित्रै दुईवटा कम्पनीको आईपीओ शेयर आउने
असार २१ गतेबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने
हिन्दू सोह्र संस्कारमध्ये एक विवाह पनि हो । विवाहले वरवधू मात्र नभई दुई परिवारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । हिन्दू धर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ । आजकल यो परम्पराको पालन मानिसले गर्दैनन् तर धर्मग्रन्थहरूमा सहगोत्री विवाहलाई निषेध गरिएको छ । अनेक अनुसन्धानहरूले व्यक्तिलाई जेनेटिक रोग नलागोस् भनी सेपरेसन अफ जीन्स अर्थात् नजिकैको नातेदारसँग […]
ज्योतिष तिष र सपनाको गहिरो सम्बन्ध छ । सपनामा कुनै महिला देख्नुभयो भने त्यसको विशेष अर्थ लाग्छ । कुनै पुरुषले सपनामा महिलालाई चुम्बन गर्यो वा संसर्ग गर्यो भने उसले अचानक धेरै धन पाउने सम्भावना हुन्छ । सपनामा बुर्का लगाइएको महिला देखियो भने मित्रबाट विश्वासघात हुन्छ । सपनामा तास खेलिरहेकी महिला देखियो भने सम्मान प्राप्ति हुन्छ र […]
विवाहपछि किन मोटाउछन् युवती, यस्ता छन् ६ कारण
दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने […]